TACSI GEERIDA KEYSE XASAN CIGE XOGHAYAHA GUUD EE XISBIGA KULMIYE | Araweelo News Network (Archive) -
Published On: Thu, Jul 21st, 2011
TACSI GEERIDA KEYSE XASAN CIGE XOGHAYAHA GUUD EE XISBIGA KULMIYE
Anigoo ku hadlaaya magaca reer Cabdi Carwo iyo kan xaaskayga Amaal Cumar Carte waxaan tacsi u dirayaa ehelka, ubadka, tafiirta kale,
gacalka, qaraabada, xigaalka, xito iyo asxaabta uu marxuum KEYSE XASAN CIGE ka tegay meel kasta oo ay joogaanba . Sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa Madaxweynaha, xisbiga KULMIYE hoggaan iyo taageeraba, xukuumadda, shacbi weynaha Somaliland, gaar ahaan gobalka Maroodijeex ee uu ka soo jeeday
KEYSE XASAN CIGE, waxuu ahaa siyaasi mustaqbal wacan, halgama danata guud hagto, nin nolasha u arkayey geedi u baahan dhaxal reeb iyo raad laga tago. Waxuu ka mid ahaa tiirarka ugu weyn ee xaqiijiyey isbedelka dalka ka dhacay. Waxuu ahaa xudunta xisbiga KULMIYE oo uu hayey mansabka Xoghayaha Guud. Waa nin lagu xusuusan doono daacadnimo iyo hammi dheer, u-hiiliye dan yarta iyo dhalinyarada.
Keyse waxuu ku geeriyooday Jabuuti maanta 17/7/2011 isagoo dhowaan ka noqday socdaal uu ku yimid Sweden iyo U.K, xanuun kedis ah oo laba cisho hayey ayuu u dhintay. Geeriduna waa xili iyo goob qoran, waana mid wax lagu qaato.
La-taliyaha Madaxweynaha ee Dhaqaalaha
Ganacsiga iyo Maalgashiga